Ikamelo langaphandle lekampu lemifanekiso yamabhodlela amanzi angamakhemikhali China Manufacturer
Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Main Mark: Americas , East Europe , Europe , Oceania , West Europe , Worldwide Ngaphandle:71% - 80% Izikweletu:BSCI, ISO9001, CE, FDA, MSDS, Test Report Incazelo:Hlunga iziphuzo zamanzi ezingabheki,Amathuluzi okuhlanza amatende wamanzi,Isihlungi Saphandle Ngama-Water Bottles
Home > Imikhiqizo > Amabhodlela Amanzi weSilicone > Hlunga iziphuzo zamanzi ezingabheki > Ikamelo langaphandle lekampu lemifanekiso yamabhodlela amanzi angamakhemikhali
Zethu amabhodlela amatende isihlungi abicah amanzi o utdoor babe 1000ml futhi 750ml usayizi ezimbili, bobabili angasebenzisa cap efanayo kanye lemifanekiso utshani, futhi bonke amatende Outdoor amabhodlela yethu isihlungi abicah amanzi kakhulu lula ngoba amanzi okuphuza kanye refilling, njengoba sonke singamadoda babe nomlomo omkhulu wokugcoba kwamanzi nomlomo omncane wokuphuza amanzi. zi-al enziwe nge-silicone ebanga eliphephile kakhulu yezokwelapha kanye nebanga lokudla pp. futhi unalo izinzuzo ezinikezwe ngezansi:
3. Ivolumu enkulu, kusuka ku 750ml kuya ku 1000ml,
Ulapha: >> Hlunga amabhodlela amanzi amanzi angaphandle >> I- Outdoor yekhamera isihlungi esincane samabhodlela amanzi
Ikamelo langaphandle lekampu lemifanekiso yamabhodlela amanzi angamakhemikhali yimikhiqizo esemqoka enkampanini yethu. Isihlungi sethu samanzi esingaphandle samakamelo angaphandle angabhekene nokusebenza kwendawo yethu. Izinto ezibonakalayo ezitokisini ze-Outdoor ekamelweni lokuhlanza ngamanzi angamabhodlela amanzi ayi- 100% we-BPA ebangeni lobuchwepheshe bebanga lobuchwepheshe kanye ne-PP. I-Outdoor amatende isihlungi abicah amanzi amabhodlela yethu ngokuphelele non-enobuthi, futhi ovunyelwe iSigungu FDA / SGS / LFGB / CE. Kuyinto enothile, engazinzile. Ngakho ngiyaqiniseka ukuthi i- bpa yethu ikhululekile ibhodlela lamanzi lingcono kakhulu kuwe .Siye senza umkhiqizo we-silicone iminyaka engaphezu kwengu-10, kanye nebhizinisi lamazwe angaphezu kweminyaka engama-4. Sinesipiliyoni seminyaka eyisishiyagalolunye ekukhiqizeni Amabhodlela wamanzi angabheki , Amabhodlela wokuhamba we-silicone , ama- Silicone ahlukahlukene , Izingane ezithinta umgexo , Amakhemikhali ahlaziya amathoyizi , Izingane ezihamba nge-pacifier clips , I- Baby teething mitten , njll. Okokugcina, Siyizimboni, ngakho-ke singakunikeza izimpahla ngentengo yokuncintisana ngekhwalithi ephakeme kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe.
Hlunga iziphuzo zamanzi ezingabheki Amathuluzi okuhlanza amatende wamanzi Isihlungi Saphandle Ngama-Water Bottles Hlunga ibhodlela lamanzi elingabuthi Faka izikhumba zamanzi angabheki 1l Uhlunga ibhoksi yamanzi angabheki Faka isiphuzo samanzi angasese Iziphuzo zokuphuza amanzi ezingenakwenzeka